ကစားသမားဘ၀မှာ စီရော်နယ်လ်ဒို ရယူဖို့ ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ မှတ်တမ်းများ
ကစားသမားဘ၀မှာ Cristiano Ronaldo ရယူဖို့ ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ မှတ်တမ်းများ
29 Aug 2018 . 3:38 PM
ပေါ်တူဂီ နာမည်ကျော်ကစားသမား စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo အတွက် ဘောလုံးလောကမှာ မရဘူးသေးတဲ့ စံချိန်မှတ်တမ်းဆိုတာ မရှိသလောက်ပါပဲ။ မန်ယူ၊ ရီးယဲလ်အသင်းတွေမှာ တစ်ဦးချင်း စံချိန်မှတ်တမ်းကောင်းတွေ ရယူခဲ့တယ်၊ ချန်ပီယံလိဂ်နဲ့ Ballon d’Or ဆုကို (၅)ကြိမ်စီ ရယူနိုင်ခဲ့တယ်။ ပေါ်တူဂီအသင်းနဲ့လည်း ယူရိုဖလားရယူခဲ့ပြီး နိုင်ငံကစားသမားဘ၀မှာပါ အောင်မြင်မှု အလံ စိုက်ထူခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် စီရော်နယ်လ်ဒိုက ပေါ်တူဂီမှာ သွင်းဂိုးအများဆုံး၊ ရီးယဲလ်အသင်း သမိုင်းတစ်လျှောက် သွင်းဂိုးအများဆုံး စတဲ့ဂုဏ်ပုဒ်တွေအပြင် သူရယူခဲ့တဲ့ စံချိန်မှတ်တမ်းတွေက နောက်လူတွေ ချိုးဖြတ်ဖို့ ခပ်ခက်ခက်ပဲ။
ဒါပေမဲ့ တခြားတခြားသော ဂန္ထ၀င်ကစားသမားတွေလိုပဲ စီရော်နယ်လ်ကလည်း ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အခုအချိန်မှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုအတွက် ကမ္ဘာ့ဖလားဆု ကိုင်မြှောက်ခွင့် ရဖို့ဆိုတာက မဖြစ်နိုင်တော့သလို သူ မရသေးတဲ့ တခြားစံချိန်မှတ်တမ်းတွေလည်း ကျန်ရှိနေပါသေးတယ်။ အဲဒါတွေက ဘာတွေများဖြစ်မလဲဆိုတာ ပရိသတ်တွေ သိရှိနိုင်အောင် ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ် . .
စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ ကစားသမား ဘ၀တစ်လျှောက် အမှတ်ပေးဖလား(၅)ကြိမ်၊ ပြည်တွင်းဖလား (FA၊ စပိန်ဘုရင့်ဖလား)(၃)ကြိမ်၊ ချန်ပီယံလိဂ် (၅)ကြိမ်အထိ ရယူခဲ့ပေမယ့် အခုအချိန်အထိ အဲဒီဆုဖလား(၃)ခုကို တစ်ရာသီထဲ မရဖူးသေးပါဘူး။ ၂၀၀၇-၀၈ ရာသီတုန်းက မန်ယူအသင်းနဲ့အတူ ပရီးမီးယားလိဂ်၊ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို ရယူခဲ့ပေမယ့် FA ဖလားကို လက်လွှတ်ခဲ့ရတယ်။ အဲဒီရာသီမှာ ကွန်မြူနတီဒိုင်းကို ဆွတ်ခူးခဲ့ပေမယ့်လည်း ဒါက အဓိက ဆုဖလားအဖြစ် မသတ်မှတ်ထားပါဘူး။ ရီးယဲလ်ကစားသမားဘ၀ နောက်ဆုံးရာသီတုန်းကလည်း ဥရောပစူပါဖလား၊ စပိန်စူပါဖလား၊ ချန်ပီယံလိဂ်၊ ဖီဖာကလပ်ကမ္ဘာ့ဖလား တွေ ရယူခဲ့ပေမယ့် လာလီဂါ၊ စပိန်ဘုရင့်ဖလားတွေ မရခဲ့လို့ စံချိန်ကောင်းတစ်ခုနဲ့ တေ့လွဲလွဲခဲ့ရတယ်။ အခု ဂျူဗင်တပ်စ် ကစားသမားဘ၀မှာ ဒီမှတ်တမ်းကောင်းရဖို့ မျှော်လင့်ချက်ရှိနေပြီ။ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းက စီးရီးအေ၊ ကိုပါအီတာလီယာ ဖလားတွေကို ရယူဖို့ဆိုတာ အခက်အခဲမရှိနိုင်ဘဲ အဓိက ပစ်မှတ်ထားရမှာက ချန်ပီယံလိဂ်ပါ။ အခုဆိုရင် ဒီရာသီ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားရဖို့ ရေပန်းစားနေတဲ့အသင်းထဲမှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းလည်း ပါဝင်နေပါပြီ။
နိုင်ငံတကာအဆင့်မှာ ရွှေဖိနပ်၊ ရွှေဘောလုံးဆုစံချိန်
စီရော်နယ်လ်ဒိုကို ကမ္ဘာ့ဖလား မရဘူးတာနဲ့ ဂန္ထ၀င်ကစားသမား မဖြစ်သေးဘူးလို့ ဝေဖန်ရင်တော့ အရမ်းပြင်းထန်လွန်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဂန္ထ၀င်ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ဖို့ နိုင်ငံတကာအဆင့်မှာ ရွှေဖိနပ်ဆု၊ ရွှေဘောလုံးဆုတွေ ရယူဖို့တော့ လိုတာပေ့ါ။ ၂၀၀၆၊ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၄ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲတွေမှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်က အနုတ်လက္ခဏာ ပြခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း (၃)ဂိုးပဲ သွင်းယူနိုင်ခဲ့တယ်။ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားကျတော့လည်း (၄)ဂိုးသွင်းပြီး ခြေစွမ်းတော့ ပြနိုင်ပါရဲ့၊ သူ့ ပေါ်တူဂီအသင်းက စိတ်ပျက်စရာကောင်းခဲ့လို့ ရှုံးထွက် (၁၆)သင်းအဆင့်က လှည့်ပြန်ခဲ့ရလို့ ရွှေဘောလုံးဆု၊ ရွှေဖိနပ်ဆုတွေနဲ့ ဝေးကွာခဲ့ရတယ်။ အခုလောလောဆယ် စီရော်နယ်လ်ဒိုက နိုင်ငံအသင်းကနေ အနားယူဖို့ အရိပ်အယောင် မရှိသေးလို့ ယူရို-၂၀၂၀ ကျရင် ပါဝင်ကစားမယ့် အနေအထားရှိနေတာကြောင့် သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ကို အကောင်အထည် ဖော်နိုင်မလားဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။
စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ Greatest Player လို့ သတ်မှတ်လို့ ရကောင်းရပါလိမ့်မယ်။ ချန်ပီယံလိဂ်သမိုင်းတစ်လျှောက် ချန်ပီယံဆုဖလားကို (၅)ကြိမ် ရယူခဲ့ပြီး၊ ပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်မှာလည်း သွင်းဂိုးအများဆုံး ကစားသမားအဖြစ် ရပ်တည်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့မှာ ကွက်လပ်တစ်ခုတော့ ကျန်နေပါသေးတယ်။ အဲဒါက ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲတည်းမှာ (၅)ဂိုးအထိ မသွင်းဖူးသေးတာပါပဲ။ ချန်ပီယံလိဂ်မှာလည်း တစ်ပွဲတည်း (၅)ဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့သူက (၂)ဦးပဲရှိပါသေးတယ်။ သူတို့ကတော့ မက်ဆီ Messi (ဘာစီလိုနာ ၇-၁ လေဗာကူဆင်၊ ၇-၃-၂၀၁၂) နဲ့ လူးဝစ်ဇ်အက်ဒရီယာနို Luiz Adriano (ရှက်တာဒိုးနက် ၇-၀ BATE ၊ ၂၁-၁၀-၂၀၁၄) တို့ပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဒီရာသီ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ တစ်ပွဲတည်း(၅)ဂိုး သွင်းခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်းကို ပထမဆုံးအကြိမ် ရယူဖို့ စီရော်နယ်လ်ဒို ဆန္ဒပြင်းပြနေပါလိမ့်မယ်။
ပရိသတ်ကြီးရေ .. ဒါတွေက စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ ကစားသမားဘ၀မှတ်တိုင်မှာ ကွက်လပ်ဖြစ်နေတဲ့ မှတ်တမ်းတွေပါပဲ။ အသက်(၃၃)နှစ်အရွယ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒို ကစားသမားဘ၀ အဆုံးမသတ်ခင် ဒီကွက်လပ်တွေကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်မလားဆိုတာတော့ . . .
Photo:Wallpaper Cave,slate.com,Getty Images
ကစားသမားဘဝမှာ Cristiano Ronaldo ရယူဖို့ ကနျြရှိနသေေးတဲ့ မှတျတမျးမြား
ပျေါတူဂီ နာမညျကြျောကစားသမား စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo အတှကျ ဘောလုံးလောကမှာ မရဘူးသေးတဲ့ စံခြိနျမှတျတမျးဆိုတာ မရှိသလောကျပါပဲ။ မနျယူ၊ ရီးယဲလျအသငျးတှမှော တဈဦးခငျြး စံခြိနျမှတျတမျးကောငျးတှေ ရယူခဲ့တယျ၊ ခနျြပီယံလိဂျနဲ့ Ballon d’Or ဆုကို (၅)ကွိမျစီ ရယူနိုငျခဲ့တယျ။ ပျေါတူဂီအသငျးနဲ့လညျး ယူရိုဖလားရယူခဲ့ပွီး နိုငျငံကစားသမားဘဝမှာပါ အောငျမွငျမှု အလံ စိုကျထူခဲ့သူဖွဈပါတယျ။ အခုဆိုရငျ စီရျောနယျလျဒိုက ပျေါတူဂီမှာ သှငျးဂိုးအမြားဆုံး၊ ရီးယဲလျအသငျး သမိုငျးတဈလြှောကျ သှငျးဂိုးအမြားဆုံး စတဲ့ဂုဏျပုဒျတှအေပွငျ သူရယူခဲ့တဲ့ စံခြိနျမှတျတမျးတှကေ နောကျလူတှေ ခြိုးဖွတျဖို့ ခပျခကျခကျပဲ။
ဒါပမေဲ့ တခွားတခွားသော ဂန်ထဝငျကစားသမားတှလေိုပဲ စီရျောနယျလျကလညျး ပွီးပွညျ့စုံတဲ့ အောငျမွငျမှုတှကေို ပိုငျဆိုငျထားသူတော့ မဟုတျပါဘူး။ အခုအခြိနျမှာ စီရျောနယျလျဒိုအတှကျ ကမ်ဘာ့ဖလားဆု ကိုငျမွှောကျခှငျ့ ရဖို့ဆိုတာက မဖွဈနိုငျတော့သလို သူ မရသေးတဲ့ တခွားစံခြိနျမှတျတမျးတှလေညျး ကနျြရှိနပေါသေးတယျ။ အဲဒါတှကေ ဘာတှမြေားဖွဈမလဲဆိုတာ ပရိသတျတှေ သိရှိနိုငျအောငျ ဖျောပွပေးခငျြပါတယျ . .
စီရျောနယျလျဒိုရဲ့ ကစားသမား ဘဝတဈလြှောကျ အမှတျပေးဖလား(၅)ကွိမျ၊ ပွညျတှငျးဖလား (FA၊ စပိနျဘုရငျ့ဖလား)(၃)ကွိမျ၊ ခနျြပီယံလိဂျ (၅)ကွိမျအထိ ရယူခဲ့ပမေယျ့ အခုအခြိနျအထိ အဲဒီဆုဖလား(၃)ခုကို တဈရာသီထဲ မရဖူးသေးပါဘူး။ ၂၀၀၇-၀၈ ရာသီတုနျးက မနျယူအသငျးနဲ့အတူ ပရီးမီးယားလိဂျ၊ ခနျြပီယံလိဂျဖလားကို ရယူခဲ့ပမေယျ့ FA ဖလားကို လကျလှတျခဲ့ရတယျ။ အဲဒီရာသီမှာ ကှနျမွူနတီဒိုငျးကို ဆှတျခူးခဲ့ပမေယျ့လညျး ဒါက အဓိက ဆုဖလားအဖွဈ မသတျမှတျထားပါဘူး။ ရီးယဲလျကစားသမားဘ၀ နောကျဆုံးရာသီတုနျးကလညျး ဥရောပစူပါဖလား၊ စပိနျစူပါဖလား၊ ခနျြပီယံလိဂျ၊ ဖီဖာကလပျကမ်ဘာ့ဖလား တှေ ရယူခဲ့ပမေယျ့ လာလီဂါ၊ စပိနျဘုရငျ့ဖလားတှေ မရခဲ့လို့ စံခြိနျကောငျးတဈခုနဲ့ တလှေဲ့လှဲခဲ့ရတယျ။ အခု ဂြူဗငျတပျဈ ကစားသမားဘဝမှာ ဒီမှတျတမျးကောငျးရဖို့ မြှျောလငျ့ခကျြရှိနပွေီ။ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးက စီးရီးအေ၊ ကိုပါအီတာလီယာ ဖလားတှကေို ရယူဖို့ဆိုတာ အခကျအခဲမရှိနိုငျဘဲ အဓိက ပဈမှတျထားရမှာက ခနျြပီယံလိဂျပါ။ အခုဆိုရငျ ဒီရာသီ ခနျြပီယံလိဂျဖလားရဖို့ ရပေနျးစားနတေဲ့အသငျးထဲမှာ စီရျောနယျလျဒိုရဲ့ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးလညျး ပါဝငျနပေါပွီ။
နိုငျငံတကာအဆငျ့မှာ ရှဖေိနပျ၊ ရှဘေောလုံးဆုစံခြိနျ
စီရျောနယျလျဒိုကို ကမ်ဘာ့ဖလား မရဘူးတာနဲ့ ဂန်ထဝငျကစားသမား မဖွဈသေးဘူးလို့ ဝဖေနျရငျတော့ အရမျးပွငျးထနျလှနျးပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဂန်ထဝငျကစားသမားတဈဦးဖွဈဖို့ နိုငျငံတကာအဆငျ့မှာ ရှဖေိနပျဆု၊ ရှဘေောလုံးဆုတှေ ရယူဖို့တော့ လိုတာပေ့ါ။ ၂၀၀၆၊ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၄ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲတှမှော စီရျောနယျလျဒိုရဲ့ စှမျးဆောငျရညျက အနုတျလက်ခဏာ ပွခဲ့ပွီး စုစုပေါငျး (၃)ဂိုးပဲ သှငျးယူနိုငျခဲ့တယျ။ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားကတြော့လညျး (၄)ဂိုးသှငျးပွီး ခွစှေမျးတော့ ပွနိုငျပါရဲ့၊ သူ့ ပျေါတူဂီအသငျးက စိတျပကျြစရာကောငျးခဲ့လို့ ရှုံးထှကျ (၁၆)သငျးအဆငျ့က လှညျ့ပွနျခဲ့ရလို့ ရှဘေောလုံးဆု၊ ရှဖေိနပျဆုတှနေဲ့ ဝေးကှာခဲ့ရတယျ။ အခုလောလောဆယျ စီရျောနယျလျဒိုက နိုငျငံအသငျးကနေ အနားယူဖို့ အရိပျအယောငျ မရှိသေးလို့ ယူရို-၂၀၂၀ ကရြငျ ပါဝငျကစားမယျ့ အနအေထားရှိနတောကွောငျ့ သူ့ရဲ့ နောကျဆုံးမြှျောလငျ့ကို အကောငျအထညျ ဖျောနိုငျမလားဆိုတာ စိတျဝငျစားစရာပါပဲ။
စီရျောနယျလျဒိုဟာ ခနျြပီယံလိဂျပွိုငျပှဲရဲ့ Greatest Player လို့ သတျမှတျလို့ ရကောငျးရပါလိမျ့မယျ။ ခနျြပီယံလိဂျသမိုငျးတဈလြှောကျ ခနျြပီယံဆုဖလားကို (၅)ကွိမျ ရယူခဲ့ပွီး၊ ပွိုငျပှဲတဈလြှောကျမှာလညျး သှငျးဂိုးအမြားဆုံး ကစားသမားအဖွဈ ရပျတညျနတေယျ။ ဒါပမေဲ့ သူ့မှာ ကှကျလပျတဈခုတော့ ကနျြနပေါသေးတယျ။ အဲဒါက ခနျြပီယံလိဂျပှဲစဉျတဈပှဲတညျးမှာ (၅)ဂိုးအထိ မသှငျးဖူးသေးတာပါပဲ။ ခနျြပီယံလိဂျမှာလညျး တဈပှဲတညျး (၅)ဂိုးသှငျးခဲ့တဲ့သူက (၂)ဦးပဲရှိပါသေးတယျ။ သူတို့ကတော့ မကျဆီ Messi (ဘာစီလိုနာ ၇-၁ လဗောကူဆငျ၊ ၇-၃-၂၀၁၂) နဲ့ လူးဝဈဇျအကျဒရီယာနို Luiz Adriano (ရှကျတာဒိုးနကျ ၇-၀ BATE ၊ ၂၁-၁၀-၂၀၁၄) တို့ပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ ဒီရာသီ ခနျြပီယံလိဂျပွိုငျပှဲမှာ တဈပှဲတညျး(၅)ဂိုး သှငျးခဲ့တဲ့ မှတျတမျးကို ပထမဆုံးအကွိမျ ရယူဖို့ စီရျောနယျလျဒို ဆန်ဒပွငျးပွနပေါလိမျ့မယျ။
ပရိသတျကွီးရေ .. ဒါတှကေ စီရျောနယျလျဒိုရဲ့ ကစားသမားဘဝမှတျတိုငျမှာ ကှကျလပျဖွဈနတေဲ့ မှတျတမျးတှပေါပဲ။ အသကျ(၃၃)နှဈအရှယျရှိနပွေီဖွဈတဲ့ စီရျောနယျလျဒို ကစားသမားဘ၀ အဆုံးမသတျခငျ ဒီကှကျလပျတှကေို ဖွညျ့ဆညျးနိုငျမလားဆိုတာတော့ . . .